Isampula-yeNcwadi yokuPrinta yasimahla eChina
Sivulekile kwaye siyifumana imveliso njengesiqhelo . Siza kuprinta kwaye sihambise iimveliso zakho ngexesha. Wamkelekile kwi Sithumelele i-imeyile,Siza kukuphendula ngeeyure ezi-2, enkosi.
Notebook & Incwadi yeJenali
Indlela yokuhambisa ngenqanawa
MOQ(Minimum Order Ubuninzi)
Iphepha elidumileyo kunye nobunzima bephepha
Ukuprintwa kweNcwadi yeFoto
Ulapha : Umphandle>FAQ>Sample free
Ngaba inkampani uya kunika isampulu yasimahla uqinisekise kuqala kwaye emva koko ulungiselele ukushicilelwa kobunzima?
Ewe sinokubonelela ngeencwadi zesampulu zasimahla.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokhetho:
1:Ukuba umsebenzi wakho wobugcisa awugqitywanga, siza kukhetha 1-2 Iincwadi zesampulu ezifanayo neemfuno zencwadi yakho ekubhekiswa kuyo. Iisampulu zethu zisimahla, Ufuna nje ukuthwala indleko zokuhambisa ngenqwelomoya. Ngokwesiqhelo ihlawulwa nge-35usd ngepaypal.
2:Ukuba umsebenzi wakho ugqityiwe, kwaye uqinisekisile iikowuti zethu, emva kokuba uhlawule 50% ngaphambili, Siza kwenza isampulu yasimahla yedijithali yokuhambisa simahla nge-DHL kuwe ukuze uqinisekise okokuqala emva koko ulungiselele ukushicilelwa kobuninzi. Fumana imvume yakho kuphela emva koko ulungiselele ukuveliswa kwemveliso.
Ukuba ukhetha njengomthengisi wakho wencwadi, Siza kuqinisekisa ukuba uzifumana ngokuchanekileyo nangobuchule iincwadi zakho. Siza kulawula onke amanyathelo kakuhle kwaye siqinisekise ngokucacileyo kunye nawe. 24iiyure ukuya kwenye ngokufudumeleyo. Ukuba unayo nayiphi na iimfuno zokushicilela incwadi, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngoku!
copyright © 2020 BookPrintingChina.com All Rights oyedwa.